युवा उद्योगी ढकाल पुरस्कृत « Loktantrapost
युवा उद्योगी ढकाल पुरस्कृत
८ पुष २०७५, आईतवार ०८:५५
जनकपुर । झापाका युवा उद्योगी दिपेश ढकाल राष्ट्रियस्तरको पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् ।
आफ्नो लगनशीलता र मेहनतबाट उद्योग क्षेत्रमा पाएको सफलताको कदर गर्दै ढकाललाई नेपाल जेसीजले युवा उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा सम्मान गरेको हो ।
आइतबार जनकपुरमा आयोजित नेपाल जेसीजको ४५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामबरण यादवले नगद पुरस्कारसहित सम्मानपत्र प्रदान गरे ।
देशभरिका २५ सय जेसीजहरुको उपस्थितिका बीच ढकाललगायत विभिन्न विधामा सात जना युवालाई सम्मान गरिएको थियो ।
भद्रपुरको साविक वडा नं ७, हाल वडा नं ६ मा २०३२ साल जेठ ४ गते पिता प्रेमप्रसाद र माता रुपरेखा ढकालको पुत्ररत्नका रुपमा जन्मिएका ढकाल झापामा सफल युवा उद्योगीको रुपमा स्थापित छन् ।
विर्तामोडको लिटल फ्लावर्स इङलिश स्कूलबाट माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सकेर मेची बहुमुखी क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा प्रविणतापत्र तहमा अध्ययन गर्दैगर्दा भद्रपुरमै गोरखकाली हार्डवेयर स्ञ्चालन गरी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा होमिएका दिपेश अहिले झण्डै एक दर्जन उद्योगका सञ्चालक छन् ।
मुख्य रुपमा चिया, सिमेन्ट, इँटा र प्लास्टिक उद्योगमा लगानी गरेका उनी गोरखकाली सिमेन्ट उद्योग, दक्षिणकाली प्लास्टिक इन्डष्ट्रिज, खुश्बु इँटा उद्योग, दक्षिणकाली इँटा उद्योग र सिद्धकाली सप्लायर्सको प्रवन्ध निर्देशक हुन् भने सनराइज सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, स्टार टी इन्डष्ट्रिज, स्टार टी इन्डष्ट्रिज तथा त्रिशक्ति ग्यास इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.को निर्देशकको भूमिकामा छन् ।
आफ्नो कुशल नेतृत्वले सबै उद्योग सफलताको शिखरमा पुर्याएका ढकाल लगभग २ हजार जनशक्तिलाई रोजगार दिएर उनीहरुको परिवारको जीवन–गुजाराको माध्यम पनि बनेका छन् ।
उद्योगमा लगानी गर्नु अघि केहीवर्ष दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो तयारी कपडा उद्योग भद्रपुरस्थित मोमेन्टो एपरेल्स प्रा. लि. मा जागिरे जीवन बिताई व्यावसायिक अनुभव हासिल गरेका ढकालले नेपाल जेसीजले आफूलाई गरेको सम्मानले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा लागिरहन थप प्रेरित गरेको बताएका छन् ।
सम्मानका लागि वीरता जेसीजले उनको नाम सिफारिश गरेको थियो ।
औद्योगिक–व्यावसायिक हकहित र उद्योग–व्यवसाय सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा सर्वदा क्रियाशील ढकाल झापा उद्योग संघको उपाध्यक्ष हुन् ।
सबैसँग सदैव मित्रवत् व्यवहार गर्ने ढकाल मानवीय सेवामा समर्पित सामाजिक संस्था रोटरी क्लव अफ भद्रपुरको पूर्व अध्यक्ष, नेपाल–भारत मैत्री संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
यस्तै, खेलकुदमा पनि उत्तिकै रुची राख्ने उनीँ उसु संघ झापा र व्याडमिन्टन संघ झापाको उपाध्यक्ष हुन् ।
नेपाल जेसीजको छनोटमा लगातार तेस्रोपटक भद्रपुरका युवा परेका छन् । यसअघि, २०१६ मा युवा उद्योगी आदित्य पराजुली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट र सन् २०१७ मा मेची अञ्चल अस्पतालमा सेवारत् डा. रामबाबु खड्का चिकित्सा सेवा क्षेत्रबाट राष्ट्रिय युवा सम्मानद्वारा सम्मानित भएका थिए ।
(जनकपुरबाट रोहित काफ्लेको सहयोगमा)